Wafdi kasocday Dalka Jabuuti oo gaaray Gobolka Hiiraan. - Caasimada Online
Home Warar Wafdi kasocday Dalka Jabuuti oo gaaray Gobolka Hiiraan.
Wafdi kasocday Dalka Jabuuti oo gaaray Gobolka Hiiraan.
Wafdi kasocday Jabuuti ayaa waxaa uu maanta gaaray magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Jabuuti C/kariim Maxamed Kaamil ayaa Wafdiga hogaaminayay waxaa kale oo ka qayb ka ahaa Wafdiga Taliyaha hay’adda Nabadsugida dalka Jabuuti Xasan Saciid, abaanduulaha ciidamada Sakariye Sheekh Ibraahin iyo mas’uuliyiin .
si dhab ah looma shaacin ujeedka wafdigaan ay u tageen Magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalkaasi Hiiraan laakiin waxa ay booqanayaan xarumaha ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti.
Masuuliyiinta Maamulka Gobalka Hiiraan ee Dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi kusoo dhaweeyay,iyadoo wafdiga loo kaxeeyay Xerada ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaale oo ah duleedka Magaalada Beladweyne.
Wasiirka Gaashaandhiga dalka Jabuuti ayaa halkaasi kulan kula leh masuuliyiinta maamulka Gobalka Hiiraan oo ay kawada hadlayaan arimaha dhanka Gaashaandhiga iyo howlgalka ciidanka Jabuuti.